Vakadzivirirwa Zvizere maAmerican Vakaudzwa Kupfeka Maso Masiki Mumba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Vakadzivirirwa Zvizere maAmerican Vakaudzwa Kupfeka Maso Masiki Mumba
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
CDC kubvunza vakazara vakatemerwa maAmerican kupfeka kumeso kumeso mukati
Iyo masking nhungamiro inogona kushandiswa chete kune dzimwe nzvimbo dzine yakakwira zviitiko zveCovid-19, kana kune vamwe vanhu.
Mazuva ese zviitiko zvitsva zve COVID-19 zvakapetwa zvakapetwa kane muUS kubva muna Chikumi.
Iyo inopfuuridzirwa Delta musiyano wecoronavirus inotapukira kunyangwe iyo yakavharirwa.
CDC sarudzo yanga iri mumabasa kwemazuva akati wandei.
Mwedzi miviri yapfuura, iyo Nzvimbo dzeUS dzekuDzivirira nekudzivirira Denda (CDC) akabvisa majekiseni eAmerica zvizere kuti vadzokere kunzvimbo dzemukati senge maresitorendi, nzvimbo dzemitambo, mashopu nenzvimbo dzekushandira dzisina masiki. Zvino, iyo agency inonzi yakagadzirira kudzosera kumashure uye kuraira vamwe vakabaiwa zvakakwana vanhu kuti vapfeke zvakare masiki ekumeso mune mamwe marongero emukati.
Sarudzo iyi, yakaitwa pakati pekuwonekera mumatare eCOVID-19, inodzosera kumashure nhungamiro yekutanga kwesangano, payakaziviswa.
Nechinonyanya kutapurirana Delta musiyano wecoronavirus inotapukira kunyange iyo yakavharirwa, uye nezviitiko zvinokwira munzvimbo dzine yakaderera inoculation mitengo, iyo CDC inotarisirwa kubvunza vese vakabaiwa uye vasina kuvharirwa vanhu kuti vavharike pavanodya mumba kana kupinda mune dzimwe nzvimbo dzakazara.
Nhungamiro yeCDC ingangoziviswa gare gare neChipiri masikati, asi mazwi ayo chaiwo anoramba asina kujeka. Iyo masking nhungamiro inogona kushandiswa chete kune dzimwe nzvimbo dzine yakakwira zviitiko zveCovid-19, kana kune vamwe vanhu. Sekureva kwemamwe mareport, achidonongodza sosi yeWhite House, kuti avo vanogara nevana vasina kubayiwa majekiseni kana vanhu vasina kudzivirirwa vachakumbirwa kuvhara munzvimbo dzeveruzhinji.
Sarudzo yanga iri mumabasa kwemazuva akati wandei. Chipangamazano weWhite House wezvehutano Dr.Anthony Fauci akati neSvondo kuti nhungamiro yakadaro yaive "iri kuongororwa" neCDC panguva iyoyo.
Zviitiko zvitsva zvezuva nezuva zve COVID-19 zvakapetwa zvakapetwa kane muUS kubva muna Chikumi, zvinoenderana nedhata kubva kuCDC. Nemazhinji kesi dzakataurwa pakati pevasina kubatwa, vakuru vevoruzhinji nevatauri venhau vakaisa mhosva kune avo vanoramba kubatwa.
"Iyi inyaya yakanyanya pakati pevasina kubayiwa, zvinova ndizvo zvinoita kuti tigare kunze uko, tichikumbira vanhu vasina kubayiwa nhomba kuti vabude vandobaiwa", akadaro Fauci neSvondo, achiwedzera kuti US parizvino iri kufamba nzira isiriyo ”zvine chekuita nekudzima COVID-19.
Sekureva kweCDC, vamwe vanhu vakuru vanosvika makumi matanhatu nemapfumbamwe kubva muzana vemuUS vakagashira kana imwe chete mushonga wecoronavirus. Nekudaro, pakati pevaya vasati vapfura, kuvhota kutsva kunoratidza kuti ruzhinji haruna chinangwa chekuzviita.